Winzip 20.0 Pro ကို Activation code တွေကို Crack + သော့ 2017 [နောက်ဆုံး]
နေအိမ် » ရိုက်သံ & active » Winzip 20.0 Pro ကို crack
Winzip 20.0 Pro ကို crack
အားဖြင့် အမ်မလီ Kenzie | ဇန္နဝါရီလ 17, 2017
Winzip Download 20.0 Crack Pro ကို Activation code တွေကိုအခမဲ့
Winzip 20.0 Pro ကို software ကိုဖိုင်ချုံ့များအတွက် ZIP ဖိုင်နဲ့အဆင့်မြင့် ZIPX format ကိုအပေါ်လုပ်ကိုင် Crack. ဒါဟာအားလုံးဖိုင်ချုံ့နှင့်တွေ့ဆုံ, အသုံးပြုသူသိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်ထုတ်ယူခြင်းလိုအပ်ချက်များကို. ဒါဟာဖိုင်တွေဇီပ်လုပ်မျုများအတွက်ကြီးမားတဲ့ tool ကိုဖွင့်နဲ့ cloud-based ဝန်ဆောင်မှုများကိုတိုက်ရိုက်သူတို့ကိုမျှဝေ. သူတို့သည်မိုဃ်းတိမ်မှသူတို့ကိုပို့ခင်အသုံးပြုသူများသူတို့ကိုစာဝှကျခွငျးအားဖွငျ့ဘေးကင်းလုံခြုံဖိုငျထားနိုငျ. အဆိုပါချုံ့ WinZip အထောက်အပံ့များ BZ2 များမှာ formats, ZipX, PPMD, LZMA နှင့် WavPack. ဦးဝင်းဇစ် software ကိုနှစ်ဦးစလုံးကို Windows နှင့် Mac လည်ပတ်မှုစနစ်များအားဖြင့်ထောက်ခံသည်. အ Winzip Crack ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်း, ZIPX, အဆင့်မြင့် compression algorithms နှင့်အတူပိုမိုသေးငယ်တဲ့ဖိုင်တွေထုတ်ပေး.
Winzip သော်လည်း 20.0 သာခြောက်ခုဖိုင် Format မှ Pro ကို Compression Crack. သို့သော် Winzip activation code ကိုမှဖိုင်များကို extract နိုင် 13 ပုံစံများ, တိုင်းစံပုံစံအပါအဝင်. ထောက်ပံ့ပေးသည်ထုတ်ယူခြင်းပုံစံများ ZIP ဖိုင်ပါဝင်, အငှားကား, RAR, GZ, ISO ကို, TAR, TGZ, IMG, ZipX, BZ2, PPMD, 7Z နဲ့ LZMA. ထို့အပြင်, WinZip အက်ကွဲ 20 software ကို Self-ဖြည်မော်ကွန်းတိုက်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်, အုပ်စုခွဲမော်ကွန်းတိုက်မျိုးစုံ volumes ကိုနှင့်ပြုပြင်ထိခိုက်ပျက်စီးမော်ကွန်းတိုက်သို့. ဒါဟာဇီပ်လုပ်မျုဖိုင်တွေကိုစီစဉ်ထား Backup တွေကိုဖျော်ဖြေဖို့စစျဆေးနှင့်အပြင်ပျက်စီးသွားသောဖိုင်တွေပြုပြင်ထားတဲ့အလိုအလျှောက်စွမ်းရည်ရှိပါတယ်.
Winzip ၏ toolbar မှာ Tools များ tab ကို 20.0 Pro ကိုလျှောက်လွှာအသုံးဝင်သော functions တွေအမျိုးမျိုးပါဝင်သည် Crack, Multi-အပိုင်း ZIP ဖိုင်အပါအဝင်, self-Extracting EXE နှင့် Uuencoded ဖိုင်. activation code ကို pack ကိုအတူ Winzip လိုလားသူအသုံးပြုသူများအ ZIP ဖိုင်ဖိုင်တွေကိုစာဝှက်ရန်ခွင့်ပြု, သူတို့စောင့်ရှောက်ဖို့ရှိမရှိဆုံးဖြတ်သို့မဟုတ်မခင်နဲ့ဖိုင်တွေဇီပ်နှင့်ကြိုးစားကြည့်ပါ. ထို့အပြင်, ဒါကြောင့်ဖိုင်တွေအပေါ်ရောဂါရှာဖွေရေးလုပ်ဆောင်သွားရန်ကိရိယာတခုရှိပြီးအခြား tool တစ်ခု option ကိုသင့် system ရဲ့ performance ကို scan ကထွက်သယ်ဆောင်ရန်. ထို့အပြင်, အသုံးပြုသူများအ PDF များမှစာရွက်စာတမ်းများကို convert နှင့် PDF files တွေကိုချုံ့နိုင်. ဒါ့အပြင်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲကူးယူကာကွယ်တားဆီးဖို့ထုံးစံရေစာထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်. ရေစာကိုခြောက်ဖိုင်အမျိုးအစားများမှ addable များမှာ, BMP နေသော, GIF ကို, JPG, PDF ဖိုင်ရယူရန်, PNG နှင့် TIF.
Winzip 20.0 အက်ကွဲ Pro ကိုအံ့ဖှယျအင်္ဂါရပ်များရှိပါတယ်
ကုဒ်ဖြုတ် B64, HQX, NEW Files တွေကို.
Configure လုပ်လို့ရတဲ့ Microsoft Windows နဲ့ Shell ကပေါင်းစည်းမှု
သင့်လျော်သောပြင်ပအစီအစဉ်များကို install လုပ်ပြီးပါက ARC နှင့် ARJ မော်ကွန်းတိုက်အဘို့ကို support
Winzip Backup တွေကိုအချိန်စာရင်းဖို့ option ရှိသည်, နှင့် backup လုပ်ထား CD ကိုမှ, DVD ဒါမှမဟုတ် Blu-ray player.
zip software ကိုလွယ်ကူဒစ်ဂျစ်တယ်ဓါတ်ပုံများနှင့်ဆင်းတု၏ကြီးမားသောစုံမျှဝေစေသည်.
ဒါဟာပိုမိုအဆင်ပြေခွဲဝေမှုအရွယ်အစားမှ high-resolution ဓါတ်ပုံတွေကိုပြောင်းပေး.
WinZip Facebook ကမှမည်သည့်ဖိုင်ကို share ပေးနိုင်ပါတယ်, Twitter နဲ့ LinkedIn တို့.
ထိုသို့သော Dropbox ကိုအဖြစ်ဖိုင်ကို-sharing ဝန်ဆောင်မှုများကို built-in ဆက်သွယ်မှုများကိုကမ်းလှမ်း, Google Drive ကို, SkyDrive ကိုနှင့် Box ကို.
Winzip Crack အသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို 20 serial key ကို
Winzip Crack Download လုပ် 2017 အမှတ်စဉ် key ကိုပုံစံတစ်မျိုးအားပေးခလုတ်နဲ့ Locker နှင့်အတူ.
Winzip နောက်ဆုံးအမှတ်စဉ်သော့သော့ခတ်နေသည်, သော့ကိုသော့ဖွင့်ရ.
ထိုအက်ကွဲ Winzip install 20.0
သင့် system ကို restart လုပ်ပါနဲ့အက်ကွဲဖိုင်ကိုအစားထိုး
ယခုပရီမီယံ activation code ကိုရိုက်ထည့်ပါ
ဒီနေရာတွင် Download လုပ်
FL Studio က 12.5.0 ရိုက်သံ
Winrar Download 5.50 ရိုက်သံ
DvDFab 10 အပြည့်အဝ Crack
Cubase9Pro ကို Crack 2017
One thought on “Winzip 20.0 Pro ကို crack”
ယောဟနျသခ ဇန္နဝါရီလ 5, 2017
ငါအထောကျအကူ Software များကြိုက် & သင်သည်သင်၏ဆောင်းပါးများသည်သတင်းအချက်အလက်. ငါသည်သင်တို့၏ဘလော့ဂ် bookmark နှင့်မကြာခဏဒီမှာနောက်တဖန်စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်.
Reply အတွက် Log ↓
Adobe Acrobat Pro ကို DC က Crack 2017